Siddeed U Hanan Kartaa Shaqaalahaaga W/Q: Hibo Ciise - Daryeel Magazine
Siddeed U Hanan Kartaa Shaqaalahaaga W/Q: Hibo Ciise
Furfurnaan: waa in wajigaaga laga dheehdaa soo dhaweyn iyo inaad diyaar u tahey wixii caqabad haysata shaqaalahaaga iney kuula iman karaan iyagoon war war iyo walaac toona ka qabin la kullankaaga, sidoo kalena isku day inaad ka war hayso xaaladooda gaar ahaaneed adoon ku talax tageyn, isku day wakhtiyada shaqada lasoo galo inaad la wadaagta salaan diiran oo ay ka muuqato dhiiri galin.
Karti: kartida iyo dhiiranaanta wax qabad ee ay kaa arkaan ayey hadba soo celinyaan iyaguna, tusaale adigaaba ah waraabe u taag iyaguna waxey noqonayaan kuwo aan waxba soo kordhin oo ishaada uun iska eega.
Maamul daadajin: qodobkani waxa uu noqon karaa hababka u muhiimsan ee shirkad, ganacsi amaba xafiis kaleba horumar loo gaadhsiin karo, waxa aad u fududaanaya isla xisaabtanka iyo is ogaanshaha iyadoo shaqaalaha laftooda mas,uul laysaga dhigayo si ay adigana kuugu soo gudbiyaan wixii xog ah eed uga baahantahey.
Xisaabtan: in xisaabtanku muhiim yahey waxa kuu cadeynaysa iney idilkeenba Aakhiri inaga danbeyso oo aan saxar laysku dhaafeyn, waxaan xisaab laheyna wax manfaca ah kuma danbeeyo, waa in kulano joogto ah loo sameeya shaqaalaha si ay iyaguna si joogto ah wax qabadkooda ugu cabiraan.
Horseed: wanaag walba oo meesha ka jira iyo daadaal kasta waa inaad adigu horseed ka noqotaa si ay isku waafaqaan meeqaamkaaga iyo waxqabadkaagu.
Is xilqaan: waa inaad xil badan iska saarta hawlaha aad gacanta ku haysid si ay iyaguna iskaga saaran mid kaa kasii badan.
Isweydiin iyo wada tashi: midna hawga tagin wuu yar yahey, waa caajis iyo wax fikira kama dhiiban karo arinkaa, laga yaaba inuu xalku kaa maskaxdiisa ku jiro, inaad wada tashi la sameyso shaqaalaha, isla markaana talooyikooda u dhag raariciso wixii wax ku ool ahna ka gunudo.
Dhiiri galin: si aad u hanato shaqaalahaaga waa inaad qofka firfircoon ee daacadda u ah horumarka hawsha siiso wax lagu abaal marinayo ha noqoto dalacaad, u kordhin mushahar amaba nooc kale oo abaal marin ah.
Furayaasha Farxadda, W/Q: Hibo Ciise Karaamo Qofkeed Ma Weydo! W/Q: Hibo Ciise Horta Adigu Yaad Tahey? W/Q: Hibo Ciise Ilaalinta Xuquuqaha Qalinkii: Ciise Maxamuud Geelle (Waddani)